Sida ay u shaqeyso hay’ada kronofogden | Somaliska
In badan ayaa laga yaabaa in aad maqashay kronofogden iyo sheekooyinka ku saabsan. Kronofogdemyndigheten waa hay’ad dowli ah oo qaabilsan arimaha ururinta deymaha, waa Laanta keliya ee awooda u leh in ay si toos ah lacag kala baxdo akoonkaaga ama ay qeyb ka qaadato mushaarkaaga, isla markaana booqato ama xitaa iibiso gurigaaga iyo alaabadaada.
Haddii ay dhacdo in aadan dhiibin lacagaha biilasha sida korontada, kirada, iwm ah oo aadan ku dhiibin waqtiyada digniinaha waxay ugu dambeynta ku dhaceysaa kronofogden taasoo isla markaas ku soo direysa digniin 10 maalmood gudahood waa in aad ku soo jawaabtaa. Haddii qofku diido in uu lacagta qabo 10 maalmood gudahood maxkamad ayaa arinta la wareegeysa. Haddii magacaaga u mar galo kronofogden cid kasta ayaa akhrin karta oo 3 sano ayuu magacaaga ku jirayaa, tusaale dukaamada deymaha bixiya iyo bangiyada ayaa arki kara in aadan deymaha si wanaagsan u dhiibin.
Canshuuraha ayay muhiimad gaar ah siisaa kronofogden. Haddii ay dhacdo in dacwad ku saabsan canshuur aadan dhiibin ay gaarto kronofogden waxaa qasab ah in aad dhiibto canshuurta xitaa haddii ay qaldantahay. Dib ayaa lagaaga soo celinayaa lacagta haddii ay cadaato in ay qalad ahayd.
Shirkadaha iyo haydaha dowliga ah ee doonaya in qof lacag looga qaado ayaa dacwadooda u gudbiya kronofogden taasoo la wareegeysa kiiska in ay qofkaas lacagta ka soo qaado. Xitaa kronofogden waxay awood u leedahay in ay kaasaarto guriga aad degantahay haddii ay kaa soo dacwoodaan dariska oo qofka guriga iska leh waxa uu sameyn karaa in uu dacwo u gudbiyo kronofogden.
Haddii ay dhacdo in qofku uu qabo deyn uusan bixin karin, waxa uu codsan karaa in laga dhaafo deynta. Haddii aad dalbato in lagaa dhaafo deynta ayaa lagaa doonayaa in 5 sano aad ku noolaato waxa ugu yar ee aad u baahantahay oo keliya, dhamaan lacagaha ka dheeriga ah waxyaabaha aasaasiga ayaa waxaa qaadanaya kronofogden.
Shirkadaha ay ku dhacdo qasaarada ayaa waxaa sidoo kale la wareega kronofogden iyagoo iibiya dhamaan wixii iibsamaya ee shirkada looga dhiibi karo deymaha.
Dad ayaa si qaldan ku gala kronofogden taasoo ay sababto biilasha oo aysan dhiibin iyo in aad adreeska ka guurtay oo aadan helin warqadaha laguu soo diro. Hadaba waxaa muhiim ah in aad ka taxadarto waayo mar haddii lacagtu ay ku dhacdo kronofogden waxaa ku sidaayo qarashaad iyo ribo.
June 30, 2011 at 13:35
Waa warbixin aad u wanaagsan , dadkeenana in ay wax ka ogaadaan hay adahaan oo kale waa arin aad u wanaagsan.
Mahadsanidiidn bahda Somaliska gaar ahaan Jimcaale.